အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 8, 2006 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
ငါမှာတစ်သန်းတန်ရှိရင်ဘယ်မှာငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလဲ။ သိပ်နောက်ကျသွားပြီ! ဒီမှာရှိနေပြီ။ Brightcove ငါဒီနေ့ Colt (Pat Coyle) နဲ့ဖုန်းဆက်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့သူတို့မှာသိပ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့မကြာခင်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်။ Colts သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အင်တာနက်မဟာဗျူဟာကိုစတင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါသိပ်မပြောချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာမစောင့်နိုင်ဘူး။
ရှေးဟောင်းလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ site ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ Youtube နဲ့ Google Video တွေမှာ ... teasers အချို့ကိုပိုက်ဆံပေါ်တင်ဖို့အကြံပေးတယ်။ Pat သည် Brightcove ကိုအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Brightcove အကြောင်းကျွန်တော်မကြားရဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တယ်။ အိုး
သင်၏ဗွီဒီယိုကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖြန့်ဝေရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန် Brightcove ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ။
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဗွီဒီယိုနှင့်ကြွယ်ဝသောမီဒီယာအကြောင်းအရာများကို စုစည်း၍ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနောက်အဆင့်သို့တက်ပါ။
ကြော်ငြာသူများ & စျေးကွက်
ဤသူများသည်ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ဗွီဒီယိုကိုအသုံးပြုလိုသူမည်သူမဆိုအားဖြည့်တင်းပေးနေသည်။ အခြေခံအားဖြင့်သူတို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိဂူဂဲလ်သို့မဟုတ် Youtube တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ဗွီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့နေပုံရသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မဆိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သည်။ ဗီဒီယိုတင်ရန်ဆန္ဒရှိသူတစ် ဦး မှ၊ ကွန်ယက်ရုပ်မြင်သံကြားကုမ္ပဏီအထိပင်။
ဤကဲ့သို့သောဝက်ဘ်မီဒီယာသို့ထုတ်လွှင့်သောအခြားကုမ္ပဏီများအကြောင်းသင်ကြားဖူးပါသလား။ ငါသိပါရေစ! ကျွန်တော်ပိုလေ့လာချင်ပါတယ်
Afternote: Gizmodo တွင်တစ်ခုရှိသည် ဆောင်းပါး ရုပ်မြင်သံကြား၏အသွင်ပြောင်းအပေါ်ယနေ့။ “ ဒီနည်းပညာတွေအားလုံးကိုဘယ်သူဖွင့်မှာလဲ” ဟုသူတို့မေးကြသည်။ Hmmm ။
Firefox Flash Hack … Justin Timberlake ၏သီချင်းအသစ်ကိုရယူပါ
သြဂုတ် 9, 2006 မှာ 8: 36 AM
ထွက်ခွာသည် http://www.barrio305.com. ဤဝဘ်ဆိုက်သည် ၎င်း၏ဗီဒီယိုကိုပြသရန် Brightcove ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးချိတ်ဆက်မှု နှေးကွေးခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။